Haddii aad isticmaasho iPad sida dadka intooda badan waxa ay u badan tahay waa in aad go in qalab loogu talagalay oo kaliya wax. Laakiin laga yaabaa in waxa ugu muhiimsan ee aad iPad waa music iyo videos. Waxa kale oo aad rabtid in tayada codka in uu u dhawaado kaamil ah si aad ku raaxaysan kartaa music iyo videos. Runta waxa ay tahay qaar ka mid ah, kuwaas oo ay ka mid yihiin qalabka mobile iPads aysan heysan tayo ku dhawaaqa oo aad u wanaagsan. Nasiib wanaag idiin, waxaa jira qaar ka mid ah Chine in waxa loogu talagalay in kor loogu qaado heerka dhawaaqa on your iPad ama qalabka kale ee macruufka. Dhibaatadu waxa ay yar tahay in qaar ka mid ah ma aha kuwo aad u wanaagsan oo aad u yeelan doonaan in ay maraan liis aad u dheer si ay u helaan suubis ah mugga tayada ugu fiican.
Kuwa soo socda waa qaar ka mid ah Waxuun 10 mugga ugu sareysa qalabka macruufka ah ee suuqa. Dooro mid ka mid ah ugu wanaagsan ee ku habboon oo tayo leh mugga aad u jeclaystay.
1. Kaiser midab Audio Player (4.5 xiddigaha)
Waxaa loo arkaa mid ka mid ah Waxuun mugga ugu wanaagsan ee qalabka macruufka. Waxay awood u tayo sare leh iyo mugga si dhakhso hagaajinaysa. Tani waa sababta oo ah waxay taageeri karaan in ka badan 4000 oo ay mawjadaha dhawaaqa oo uu leeyahay Qaraarka sare awoodaha loo maqli karo dhawaaqa. Waa go in ay app kuwa raadinayso ah app suubis ah mugga iPad tayo sare leh.
4 hababka loo maqli joogto ah
Waxaad ka bedelan kartaa afhayeenka in headphone ama headphone inay xirto ama airplay oo dhan si aad u fudud.
Tayada sanqadha waa mid cajiib ah
Waxa kaliya ee la shaqeeya qalabka macruufka, ma loo heli karaa Android
Ugu $ 9.99 waa in yar oo ah mid qaali ah inta badan dadka
Waxaa wax yar adag tahay in ay isticmaalaan oo laga yaabaa inay qaadato muddo ah si ay u bartaan
2. Standard Super Cod dheer (3.4 xiddigaha)
Ugu qiimo dheeraad ah oo macquul ka badan midab Kaiser ah, Cloud Sound bixiyaa mid ka mid ah waayo-aragnimo music nooc ah. Tani waa sababta oo ah waxa horumari doona codka aad iPad si kaamil ah u Bass xaamiga ah ee dhammaan qaybaha of music. Waxa kale oo uu leeyahay awood u leh inuu kor loogu qaado video dhawaaqa iyo weliba.
Ugu $4.99 app tani waa gaadho dadka isticmaala inta badan
Waxay leedahay Bluetooth oo Wi-Fi awoodda
Waxay bixisaa dhawaaqa tayo fiican
Ma la music geeyo shaqeeyaan. Lugood ama twitter Kaliya
3. Bass Yididiilo (4.2 xiddigaha)
Shaqeeyaa si aad u wanaagsan si kor loogu qaado tayada Bass codka
Siiyaa user gacanta buuxda ee Bass ah
Waxaad qabsato karaa heerka mugga ee mawjadaha gaarka ah
Waxaa loogu tala galay in la isticmaalo iyadoo headphones oo ku lifaaqan ku hadla kaliya
4. barbaraha (3.6 xiddigaha)
App wuxuu ku siinayaa user awood u leedahay in si buuxda uga taliso soo saarka dhawaaqa ay iPad. Waxay leedahay mugga awood hagaajinaysa 12 codku. Waxaa la iman gacanta dadban, gacanta dunuunaca ay ka mid koobin kale fududahay in la isticmaalo gacanta.
Mid ka mid ah Waxuun mugga ugu awooda badan ee suuqa
Wax soo saarka oo codkii waa mid cajiib ah la app this
Ka shaqeeyaa watch inankeeda la iPhone ah
Kaliya shaqeeyaa qalabka macruufka. Ma jiro Android version
5. SonicMax Pro (4.7 xiddigaha)
Tani waa app waxaa si buuxda mugga kuwa jecel in ay music aad u cod weyn. Waa la heli karaa ee iPad iyo iPod iyo yimaado leh user saaxiibtinimo interface.
Waxaa la sameeyo BBE Pro shirkad caan ku ah wax soo saarka xirfad music
Waxaa ka shaqeeya si aad u wanaagsan si kor loogu qaado codka
Waxaa aad u sahlan in reserved iyo isticmaalka
Waxaa la ogyahay in ay shil ay sabab u tahay dillaac ah xasuusta go'an
6. Stage Pass (4.8 xiddigaha)
Tani waa # 1 ugu soo bixi mugga hagaajinaysa app ee Japan iyo # 6 guud. Inta badan dadka isticmaala tilmaamaan sida mid ka mid ah waayo-aragnimo ah nooc. Waxaa retails at $ 0.99 oo horumarsan by Bitcount Ltd.
Inta badan dadka ayaa waxaa loo isticmaalaa oo Tawreed ah in ay wax ku-oolnimada
Waxaa si wanaagsan loogu talagalay iyo fududahay in la isticmaalo
Waxaa si gaar ah loogu talagalay dhageysto in ay ku noolaadaan music
7. Volume Yididiilo (2.3 st0ars)
App Tani lacag la'aan ah ka shaqeeya oo kaliya iyo sidoo kale qaar ka mid ah kuwa ka qaalisan. Waxa ay ku siinaysaa user interface isku dhafan oo ay gacanta ku mugga oo kuu ogolaanaya inaad si ay u xakameeyaan mugga music aad ka baxsan iPad ee awoodda.
Waxaa diyaar ahaadaan si loogu download
Waa lacag la'aan ah
Waxaa ka shaqeeya si aad u wanaagsan
Waxay leedahay rating ah mid aad u yar ku dhex users
Ma aha mid aad la isku halayn karo oo mararka qaarkood laga yaabaa in shil
8. barbaraha Pro (4 Stars)
App Tani waxaa loogu talagalay si loo horumariyo awoodda aad warbaahinta ciyaaryahan ee oo kor loo qaado tayada codka. Waxaa loogu talagalay in ay isticmaalaan qalabka ku iPhone, iPad iyo iPod.
A user saaxiibtinimo interface
23 ee saamaynta dhawaaqa xirfad dhisay
Waxaad si fudud u qabsato karo tayada loo maqli karo il audio
Waxa aad ku kici doonaa qiyaastii $2.99 si ay u bartaan app this
9. iBoom Volume buusterka (2.7 xiddigaha)
Tani waa app kale la yaab leh kuwa jecel in ay music super cod weyn. App wuxuu kuu ogol yahay in ay doortaan heerka Faahfaahin aad rabto. Sidoo kale waa app ah in loogu talagalay in lagu caawiyo dadka qaba dhibaatooyinka maqalka.
Waa app ah in ugu horayn waxa loogu tala galay in la caawiyo dadka qaba dhibaatooyinka maqalka
Kuwa iibsaday si kor loogu qaado ciyaaryahan music ay arkeen inay ahayd aan waxtar leh
Waxa aad ku kici doona $1.99 inaad kala soo baxdo
10. barbaraha + (3.4 xiddigaha)
Tani version of app barbaraha ma aha oo kaliya ciyaaryahan music ah laakiin suubis ah mugga. Waxaa ka shaqeeya si ay u caawiyaan in aad kor loo qaado tayada codka aad ka heli. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad gacanta 5 mawjadaha band kala duwan. Waxaad isticmaali kartaa sida diirada iyo qaababka aad u badan ay u soo bixin sida ugu fiican ee aad music.
Waxa kale oo ay kor u laban ciyaaryahan music ah
Waxaad u helaan aan xad lahayn si maktabadda music aad
Music search sidoo kale waa la heli karaa
Sida loo sameeyo playlist ku iPad
> Resource > iPad > 10ka Best Apps Yididiilo Volume u iPad